Ukuqonda umbhalo: amasu wokuwuthuthukisa
Amasu wokuthuthukisa ukuqondisisa kombhalo
Ukuqonda umbhalo kungumphumela wezinto eziningi (ugqozi, ukunakwa, amakhono we-lexical nokunye okuningi ...). Lapha siphakamisa uchungechunge lwamasu esingawasebenzisa ngaphambili, ngesikhathi nangemva kokufunda ukuze sikuqonde kangcono lokho esikufundayo.
Ulapha: Ikhaya » Okwabazali » Funda kangcono » Amasu wokuthuthukisa ukuqondisisa kombhalo
Ukuqonda umbhalo yilona umphumela wezinqubo eziningi: kusuka ekufundeni kuya ekucabangeni, kusukela ekuhlanganisweni kolwazi nolwazi lwangaphambilini kuya ekugcineni kwimemori.
Lokhu kuba yinkimbinkimbi akusivumeli ukuthi sinikeze impendulo engavumanga embuzweni: siyini isisekelo sokungazwisisi umbhalo? Izibonelo ezimbili ezihluke kakhulu: wonke umuntu uyakwazi lokho, uma singekho ukulalela, singakholelwa ukuthi sifunda isigaba bese sifika ephuzwini futhi sizibuze ukuthi yini esisanda kufunda. Elinye icala lapho ukuqonda kungenzeki khona lelo elivela emibhalweni ekhethekile izihloko esingazazi, futhi okungadinga iminyaka yokutadisha ukuze nje wazi izincazelo zamagama asetshenzisiwe.
Lezi izibonelo ezimbili nje, kepha zingaba ngaphezulu kakhulu. Eqinisweni, akukhona ukujwayelana nombhalo kuphela nezinsizakusebenza ezibhekisisa okunquma ukuqonda okusebenzayo kombhalo. Lolu uhlu olungaphelele lwezinye izinto eziqala ukusebenza:
Amakhono we-Lexical (silulumagama)
Ukusetshenziswa kwamasu (bona ngezansi)
Izinga lobunzima bombhalo
Uhlobo lombhalo (izinkondlo, izinganekwane, izindaba)
Ukuqonda umbhalo kungumphumela wezinto eziningi: ugqozi, ulwazi ngesihloko, isitayela sokufunda, ukusetshenziswa kwamasu ...
Silandele ku-Facebook ukuze uvuselelwe kumibhalo yakamuva
Ijubane nokunemba kokufunda yizici ezimbili ezibalulekile ekuqondeni umbhalo, yize kuyiqiniso ukuthi ukufunda okusheshayo, ngokwakho, akuqinisekisi ukuthi uyakuqonda osanda kukufunda (ungafunda, empeleni, ngomshini, ngokuwabiza kahle wonke amagama, ngaphandle kokuthola nomqondo omncane wokuqukethwe). Ngakolunye uhlangothi, kunjalo, kuyiqiniso ukuthi ukufunda kuhamba kancane kakhulu futhi kunzima kususa izinsizakusebenza ebezingenzelwe ukuqonda umbhalo. Lo mkhuba uba sobala ngokwengeziwe njengoba imfundo yanda: imibhalo iya ngokuya iba yinkimbinkimbi futhi imisho iba mide, ngakho-ke izingane ezinenkinga yokwenza inqubo yokufunda ifane nemvamisa azikwazi ukuba nombono jikelele walokho ezisanda kukufunda , ngemiphumela esobala yokufunda.
Isimo sengqondo esisebenzayo
Kunamasu angasiza ukuthuthukisa ukuqonda kombhalo. Iphuzu elibalulekile ukuqasha isimo esisebenzayo maqondana nendima ezofundwa: esikhundleni sendawo yamagama, umfundi kufanele abhekane nemiqondo ehlongozwayo ngumbhalo ngendlela ebucayi: yenza izibikezelo ngombhalo, zama ukuqonda ukuxhumana phakathi kwezinto ezahlukahlukene, phawula ezibaluleke kakhulu, qonda ukuthi yini ukuthi umbhalo wamcasula.
Nalu uhlu, futhi olungasebenzi ngokuphelele, lwe amasu wokuthuthukisa ukuqonda.
Yenza imibono mayelana nombhalo: luhlobo luni lombhalo, kungenzeka ukuthi lukhuluma ngani, kwenzekeni ngaphambi kwalokho, okungenzeka ukuthi kwenzeke
Funda isihloko sombhalo, izihloko zezigaba, bheka izithombe ukuthola ukubuka konke kwesihloko
Qhubeka ubukisise umbhalo bese ubikezela
Gcizelela (ngokwehlukile) imiqondo ebonakala ibaluleke kakhulu naleyo engacacile ngokuphelele
Ngicabanga "ngiyaqonda yini engikufundayo?"
Ubhekene nesithiyo, zama ukuqonda ukuthi singakwazi ukweqa okwesikhashana (bese sibuyela kuyo ngokuhamba kwesikhathi) noma uma kubalulekile ukuthi kucace ngokushesha
Lapho ubhekene negama elingaziwa, zama ukuthola incazelo kumongo, futhi kunoma yisiphi isimo ulifune kwisichazamazwi
Zibuze: "Ngabe ngisiqondile isihloko esiyisihluthulelo sombhalo?"
Buyela emuva ekubikezelweni kwakho ukuze uqonde uma ngabe kuqinisekisiwe noma kunqatshiwe (futhi ngakanani)
Thatha ngokomzwelo, lapho kungenzeka, kulokho okufundwe. Uthini umbono wakho?
Fingqa, ngamagama asemqoka, izinto ezibaluleke kakhulu
Yenza uhlelo lokuxhuma izinto ezibaluleke kakhulu: isikimu akufanele kube nje iwebhu yamagama exhunywe ngemicibisholo, kepha ikhombisa ukusethwa kokuqukethwe
Xoxa ngesihloko nabanye abantu (abangani, abantu abadala, ontanga)
Sesha imininingwane eyengeziwe (futhi kwi-inthanethi)
Amakhadi ethu wamahhala ekuqondeni kombhalo
Iyiphi indlela ephumelela kakhulu yokutadisha?
Isiqondisi sevidiyo ku-CMapTools, isoftware yamahhala yokwakha amamephu womqondo
Uhlu lwamathuluzi okuncenga ocwaningweni
Ukuqonda umbhalo ngaphezu kwesivinini sokufunda: inkumbulo yokusebenza ngamazwi (yabachwepheshe)
Amasu wokuthuthukisa ukuqondisisa kombhalo2015-03-242020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2014/12/a002574406-scuola_studio_libriR400.jpg200px200px
Imithetho eyi-10 yokufunda kabiIndlela yokutadisha, Funda kangcono
Ungayenza kanjani (futhi ungenzi) iphethini: amathiphu ayi-6 asebenzayoIndlela yokutadisha, Funda kangcono